Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » COVID-19 Namono Tena tsy navela Famonoana an'i Neny sy ny Zanany
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Vonoina ny famonoan-tena COVID-19 - sary natolotry ny Pattaya Mail
Tany Pattaya, Thailand, nisy ny famonoan-tena mety ho vonoan'olona COVID-19 nosakanana rehefa nosakanana ny vehivavy iray tsy hamono ny tenany sy ny zanany lahy kely noho ny toe-javatra nahakivy nateraky ny COVID-19.
Vehivavy iray 35 taona dia fantatra amin'ny anarana hoe Dao, teratany Laosianina, izay nitomany niaraka tamin'ny zanany lahy 7 taona tany ivelan'i Tuanthong any amin'ny Distrikan'i Pong izay nikasa hamono tena noho ny famonoana olona COVID-19.
Vondron vehivavy iray no nahita azy roa nitomany, ary nilaza tamin'izy ireo i Dao fa handeha ho any amin'ny Reservoir Mabprachan izy ireo mba hamono azy roa lahy.
Ilay drafitra hafa dia noresahiny momba ny familiana fiara eo alohan'ny kamio 18-kodiarana amin'ny bisikiletany.
Ny vadin'i Dao, 51 taona, Krit Banjong, dia miasa amin'ny maha mpiambina azy, na izany aza, very asa izy tamin'ny onja fahatelo an'ny COVID-19 noho ny fandroahana asa. Nilaza izy fa tsy manam-bola ampy handoavana ny hofan-trano na hividianana sakafo na rano fisotro.
Ny sefo fokontany Pong Moo 4, Ekachai Eimreung, tonga teny an-toerana tao amin'ny Soi Mabprachan Lang 3 hanome azy ireo sakafo sy 500 baht hamakivaky ny alina miaraka amin'ny fampanantenany hiresaka amin'ny tompon-trano momba ny fampiatoana vonjimaika ny fandoavan-trosan'ny fianakaviana. Nanaiky ny tompon-trano hamela azy ireo hanemotra ny hofan'izy ireo amin'izao fotoana izao.
Ny iray tamin'ireo vehivavy nahita ilay nitomany dia tonga tao amin'ny trano fonenan'ny fianakaviana niaraka tamin'ny namany ary nanolotra sakafo, kojakoja ary vola ho an'i Dao izay nampanantena fa tsy hanandrana hanisy ratsy ny tenany na amin'ny zanany lahy intsony izy.
Lahatsoratr'i Eswatini Nanaiky ny rehetra